Mpamatsy fanampiny mpanampy hafa | Sina Mpanamboatra Additives hafa
Ammonium Bicarbonate (Sakafo ara-tsakafo) dia ampiasaina matetika ho mpamatsy sakafo, zezika mandoto, zezika tsy mitongilana, sns. Ammonium Bicarbonate (Kilasy indostrialy) dia azo ampiasaina amin'ny loko, hoditra, fehikibo vita amin'ny kofehy, fivarotam-panafody, indostria simika isan'andro, fanorana elektrika, seramika, afo mpamono afo sy jiro fanala. Sakafo ara-tsakafo ITEM STANDARD Fahadiovana% 99.2 min Cl% 0,003 max SO4% 0,007 max As% 0,0002 max vy mavesatra (toy ny pb)% 0,0005 max Residue (Tsy mikorontana) 0 ....
Ny calcium chloride dia sira tsy mitambatra, izay misy matevina na ranoka. Ny calcium chloride calcium dia singa fotsy sy kristaly miendrika flake, granule, pellet na vovoka. Miaraka amin'ny atin'ny rano manjelanjelatra isan-karazany, dia mety ho dihydrate na anhydrous izy io. Ny calcium chloride calcium dia vahaolana tsy misy loko sy mazava. Satria ny calcium calcium dia manana fananana toy ny fanalefahana haingana, ny fahaizan'ny exothermic, ny fisarihana ny hamandoana avy amin'ny rivotra sy ny manodidina, ary mihalefaka amin'ny mari-pana II ambany.
1. Amin'ny maha mpandraharaha mpandroba, mpanamora sy mpihatsaravelatsihy ny koba, ny soda dia azo ampiasaina amin'ny mofomamy ary azo ampiasaina tsara mifanaraka amin'ny filan'ny famokarana. 2. Ny soda miampy dia azo ampiasaina amin'ny fanadiovana ao an-trano, toy ny fanasana legioma sy voankazo, akanjo ary fampiharana fanadiovana hafa araky ny fangatahana. 3. Ny soda fanabeazana matanjaka dia ampiasaina amin'ny famokarana rano mba hanitsiana ny sandan'ny PH amin'ny rano pisinina 4. Amin'ny indostrian'ny fingotra dia ampiasaina amin'ny famokarana fingotra sy spaonjy izy io. 5. Ao amin'ny fanontana sy fandokoana ...